Tanora · Oktobra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Oktobra, 2016
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Oktobra, 2016
Tian'i Hong Kong Hampahafantarina Fotsiny Ve Izay Tena Soatoavina Lalaina Amin'ilay Valisoa Miteraka resabe?
Azia Atsinanana30 Oktobra 2016
Tamin'ny lahateniny, namporisihan'i Fonia Wong Leung-Fong ny tanora mba hanaraka ny ohatra nasehony ary hiasa "efatra heny mafy kokoa noho ny ankamaroan'ny olona."
Mahatonga Ny Zazavavy Ho Marefo Manoloana Ny Fanararaotana Ny Lalàna Sy Ny Toe-tsain'ny Fiarahamonina Ao Myanmar
Azia Atsinanana21 Oktobra 2016
Manasongadina ny tsy fisian'ny fiarovana avy amin'ny governemanta manoloana ireo lasibatry ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao Myanmar ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tovovavy tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana anatiny ao amin'ny fanjakana Kachin, Myanmar.
Mikorisarisa Eny “An-Dohasahan'ny Havoana Arivo” Ry Besorongolan'i Afrika Atsimo
Afrika Mainty20 Oktobra 2016
Lalao tsy mahazatra ny ao Afrika Atsimo, indrindra eo amin'ny mainty hoditra ny Skateboarding na ny fikorisana an-takelakazo.
Voatsikera Mafy Ho Mampiasa Sarin'ankizy Tsy Ampy Taona Mitondra Basy Hahazoana Isa Ara-Politika ny Mpanohitra ao Trinite & Tobago
Voahitsakitsaka ve ny lalàna? Fandrebirebena tokoa ve ny zava-drehetra? Nidina ve ny fomba fanaovana politika? Taorian'ny fivoahan'ny sarin'ireo ankizy tsy ampy taona milanja basy naseho tao amin'ny parlemanta, manontany ny mpiserasera...
Zavatra 9 Itiavana an'i Afghanistan
Azia Afovoany sy Kaokazy15 Oktobra 2016
Amin'ny mofo tsara indrindra eto ambonin'ny tany, ny voatavo sy ny ampongabendanitra, sy ireo mponina isan-karazany tia mandray vahiny, dia inona izany no tsy metimety ao amin-dry zareo ireo?
Sehatra Ho An'ny Fahasamihafana Ny Kliobanà Kitra Mitafy Hijab any Amin'ny Farany Atsimon'i Thailand
Azia Atsinanana12 Oktobra 2016
"Amin'ny fanombohana ny kliobanà baolina kitra sy fisarihana ireo vehivavy mba hanjohy io, milaza amin'ny fiarahamonin'i Patani izahay hoe afaka manao izay zavatra ataon'ny lehilahy ihany koa ireo vehivavy."
Nahoana Ny Efitra Fandroan'ny Japoney No Tsara Indrindra, Sy Lahatsary Hafa
Azia Atsinanana11 Oktobra 2016
Ankizy no nanatontosa ity bilaogin-dahatsary ity ary manazava ny hoe tahaka ny ahoana ny fiainana ao Japana.
Vao 6 Taona Monja, Saingy Efa Manana Mpankafy Manerana Ny Tany i Sefo Kicha Avy Ao India
Azia Atsimo06 Oktobra 2016
"Kicha, mahafatifaty ianao ao anatin'ilay fandaharana. Ho an-jaza iray enina taona, miaka-tsehatra amin'ny fandaharan'i Ellen, fatratra izany ary dia nahavitra asa goavana ise. Tena fahombiazana"